Talo iyo Tusaale — Horn of Africa Wonderbag
Horn of Africa Wonderbag	Somali | English | French
Waa maxay Wonderbag?
Qu’est-ce qu’un WONDERBAG?
Talo iyo Tusaale Tusaale
Waxa aad u isticmaali kartaa Wonderbag si aad ku kaydsato cuntooyin qabaw ama baraf ah oo ay ilaa 12 sacacadood barafka kuu kaydinayso.
Isticmaal disti ku habboon oo si fiican u dhex gasha Wonderbag. Kulku waxa uu si fiican u kaydsamayaa marka ay distidu buuxdo oo si fiican kiishka u leegtahay. Sidoo kale distiga aad isticmaalayso waa in daboolku si fiican u hayo oo la doorbido kuwa aan galaaska ka samaysnayn.
Si fiican u dabool Wonderbagta adiga oo raacaya wakhtiyada loogu talo galay cuntooyinka. Haddii aad furto, waxa dibada u soo baxaya kulkii aad kaydinaysay. Sidoo kale kul fiican ayaa aad kaydinaysaa haddii daboolku si fiican u hayo oo aanu daloolka yare ee ay ka neefsato lahayn
Dadka qaarkood tuwaal aya hoos dhigaan Distiga oo ay ka ilaalinayaan Wonderbagta in ay wax ku daataan.
Wonderbagtaada u qaado meel kastado. Waa aald kuu suurto galinaysa in aad cuntda dibadda u qaadatid ama kuu kaydisa kulayl/qabow marka aad safar u baxaysid.
Toos ha u galin Wonderbagta disti aad dab aad u sarreeya ka qaaday. Habkarisyadu dhamaantood waxa ay ku tusayaan in aad dabka yarayso ama dhexhdexaad ka dhigto ka hor inta aanad ku wareejin Wonderbagta. Tixraac habkariska iyo waqtiyadiisa.
Ha galin cunto qayb laga cunay ama cunto diiran Wonderbagta. Waxa neqon doonta meel bakteeriyadu ku tartanto.
Ka ilaali dabku inuu taabto Wonderbagta.
Toos ha u galin cunto aad moofoda ka kulul 180C aad ka soo saartay. Ha isticmaalin disti ka samaysan dhoobo.
Marka cunto kuugu jirto Wonderbagta, ka fogee meel carruurta yaryari ay rogi karto.
Waxa aad ku dhaqi kartaa Wonderbagta mishiinka dharka laakiin ha galin qallajisada
Copyright © 2017 Wonderbag - All rights reserved